Usuku My Pet » Uthando in 7 Easy Steps
Uthando in 7 Easy Steps
Igcine ukubuyekezwa: Septhemba. 30 2020 | 2 imiz ufunde
Falling in love ingenye imizwa imilingo kakhulu emhlabeni. Sigcwele akuhlali okuhlanzekile nokwaneliseka, ngokuba in love with the umuntu ilungelo kukwenza uzizwe sengathi wena Ungakunqoba yini. Uma simthanda ngempela umuntu, libhekene kokubili injabulo nosizi kuwubufakazi wangempela ubuqotho nokusondelana of the ubuhlobo. Nakuba uthando luyindida, ngezansi lesesikhulume yini uthando yilona futhi sifinyelele kanjani ehlala njalo uthando 7 izinyathelo ezilula.
Step #1: Iyona Yodwa
Umphefumulo wakho womshado ilinde atholakale. Isikhathi esiningi, wazi zisuka lapho uhlangana neminye uhhafu yakho, imiphefumulo yenu ezimbili ukuxhuma futhi uyozizwa wena sengathi them bazana. Uma usuthole lokhu, kubalulekile ukuba agxilise kuphela positives. Ukubheka amaphutha umlingani wakho ngeke kuholele ebuhlungwini benhliziyo. Funda bamukele zonke izici umlingani wakho futhi ukubuya, uzothola ukwethembeka okuphakade futhi uthando.
Step #2: Bamukele izidingo umlingani wakho
Kinanyana ngibuphi ubuhlobo kubalulekile ukuthi zezidingo zakho ukulinganisela nabalingani bakho. Iningi le sikhathi uyoba ekhasini efanayo kodwa kuyoba nabathile zimo izikhathi lapho izidingo zakho zihlukile. Kubalulekile ukuzibeka esimweni sabangane umlingani wakho ukuze uqiniseke ukuthi zonke izidingo zabo ziyafezwa.
Step #3: Lalela umlingani wakho
Ukulalela umuntu omthandayo kuyindlela engcono kakhulu yokufunda ukuthi bangobani ngaphezu ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zabo kanjani. It kuyokusiza ukuba uzizwe exhunywe umlingani wakho, baqonde ukuthi bakuphi ekulweni siqu, bebasekela ngezikhathi isidingo, futhi bethola izindlela ezahlukene ukuze basize ngibenze smile. Njengoba abantu, sifunda njalo ekhula yingakho ekulalela kubalulekile ukugcina uthando lwakho luqinile.
Step #4: Yazisa umlingani wakho
Ozithobayo sazise zonke izinto ezinhle mayelana umlingani wakho kanye nezinto ezinhle abazi kuzosiza ukuqinisa isibopho sakho. Ukugxila ezicini ezinhle kwenza kube lula ukuba abanye izinto zingahambi, abazishaya indiva nezithikamezo zase zilibalekile, futhi ukwamukela umsebenzi ophilayo kuze abalingani bakho okulindele.
Step #5: Chitha isikhathi nomlingani wakho
Ukuhlela isikhathi njalo sokuba ndawonye kubalulekile ukhule njengoba umbhangqwana. Ngokuchitha isikhathi ndawonye, uzothola ukwabelana imicabango yakho, imizwa, futhi izinkinga. Nalokhu isikhathi esithileko ngahlanganyela, isibopho sakho uyojulisa ukwakha ubungane obuseduze ngaphezu ukuthandana. Isihluthulelo uthando okuphakade iwukuba ube kunakho abangane.
Step #6: Yiba nomusa umlingani wakho
Uma ucabanga into nice, ukusho umlingani wakho. Umusa kuwuphawu ezingavamile nokho elinamandla romantic. Nakuba kuthatha sengozini ukuba abe nomusa, meanness kugcine sekuqede ukubambisana ngesikhathi umusa nasekondleni.
Step #7: Gcinani uthando luvutha alive
A uhambo romantic noma ukuphakamisa isandla akuyona nje ukumangala ephelele kodwa isipiliyoni kusiza ukugcina izinto ziphila futhi unothando. Ukubona into entsha ndawonye kuzosiza ukuba wambule izinto ezintsha futhi okuthakazelisayo mayelana nomunye.
Nakuba falling in love kuyajabulisa, kubalulekile ukuba siqaphele ukuthi passion ngamandla akufani njengoba ukusondelana. Uthando kudinga isibindi kanye nomsebenzi, futhi kuba inhlanganisela izici eziningi ezahlukene eyenza uthando olujulile. Kodwa once uthando kufinyelela kulelo zinga esiqinile, kuba support okungantengantengi ebubini nasebuhleni, futhi kuba nokuxhumana zingephulwa ngempela never.
5 Izinto Izidumi ingasifundisa Ubudlelwano
Indlela Ukuphola A Girl Ebonisa Uthando Little
Dating Nobuhlobo Iseluleko – Law of Attraction